व्यक्तिगत घटना समयमै दर्ता गर्दा के फाइदा हुन्छ ? – Reporters7.com | Nepal's News Portal | Online News Portal from Nepal
Home /व्यक्तिगत घटना समयमै दर्ता गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
व्यक्तिगत घटना समयमै दर्ता गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
‘काम साँची आफूलाई, खान साँची अर्कालाई’ भन्छन् बुढापाका । ब्यक्तिगत घटना दर्ता नगरि बस्नु भनेको पनि पछिसम्म आफ्नै लागि काम साँचेर राख्नु जस्तै हो । बेलैमा जन्मदर्ता नगर्दा केटाकेटीलाई बिद्यालय भर्ना गर्न समेत पाईदैन ।
बिवाह दर्ता नगर्दा नाता प्रमाणित गर्ने कानूनी कागज हातमा हुँदैन । जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक घटना दर्ता गरेको खण्डमा सरकारी अड्डामा फटाफट काम हुन्छ । त्यसैले, आफूसँग सम्बन्धित सबै घटना ३५ दिन भित्र वडा कार्यालयमा दर्ता गरि हाल्नु पर्छ । नत्र कतिबेला कहाँ अप्ठेरो पर्छ भन्न सकिन्न । त्यसैले त भनेको ब्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्नु भनेको काम साँचेर पछिका लागि दु:ख बोकेर राख्नु जस्तै हो ।
व्यक्तिगत घटना दर्ताका बारेमा विस्तृत जानकारी एन्ड्रोइड मोवाइलको थाहा छ (Thaha Chha) मोवाइल एप्लिकेसनबाट पनि लिन सकिन्छ । थाहा छ एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा गई डाउनलोड गर्न सकिन्छ । थाहा छ एप्लिकेसन एकपल्ट डाउनलोड गरिसकेपछि इन्टरनेट नहुदाँ पनि चल्छ ।
यो सामग्री मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह र अक्फाम नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सम्बन्धि थप जानकारीका लागि